AMPILAOLAVA RN5 : Teratany sinoa iray notifirin’ny jiolahy nirongo basy ny zoma lasa teo
Marisarisa tanteraka ny fandriampahalemana ao Toamasina amin’izao fotoana izao. Isan’andro, dia ahenoana trangana asan-jiolahy hatrany. 13 mars 2018
Ny zoma 9 marsa lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora sy 20 mn hariva, tao Tanamakoa akaikin’i New Jack, dia ramatoa iray mandeha posy bisikileta no nisy nanendaka. Manao taingin-droa tamina moto jog ireo mpanendaka. Vokany, lasa ny sakaosy teny an-tanany.
Ny alakamisy 8 marsa tamin’ny 8 ora alina, tovolahy iray no nisy nanendaka tao Béryl. Ny zoma 9 marsa tamin’ny 10 ora sy sasany maraina, ramatoa iray avy niantsena hamonjy ny fiarany no nendahina mpanendaka avy ambony moto. Ampahany tamin’ny fanendahana niseho tao Toamasina ny herinandro lasa teo ireo.
Araka ny efa nambara, dia niverina mafampana ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina.
Tsy mijanona amin’ny fanendahana tsotra fotsiny izany fa niverina masiaka hatramin’ny fanafihana mitam-basy. Ny alarobia hifoha alakamisy lasa teo, mpandraharaha ara-toekarena, teratany sinoa no nisy nanafika tao Ampilaolava, lalam-pirenena fahadimy. Raha ny fanazavana voaray, dia jiolahy 12 lahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika, toy ny kalaky no nanafika an’ity Sinoa monina ao Ampilaolava ity. Tsy mbola fantatra hatreto ny tontalin’ny vola voaroba. Naratra mafy kosa ilay Sinoa vokatry ny tifitra nahazo azy. Tsy vita tao Toamasina ny fitsaboana fa tsy maintsy nalefa any Antananarivo. Tsy mbola nisy voasambotra kosa ireo jiolahy nanafika azy hatreto.